Sida loo sameeyo naylo jaban oo dayactir ah oo loogu talagalay burushka burushka Bosch - Ikkaro
Inicio >> Dayactirka >> Sida loo sameeyo beddelka xarriijinta nayloon ee loo yaqaan 'Bosch burcosterters'
Kuwa sawirka la socda kharashka mashiinka € 25 xirmada 10 cutub oo 30cm ah taasi waa, € 25 3 mitir Halka gariiradda ay nooga fadhiyaan € 10 oo ah 60 ama 70 mitir. Farqi badan ayaa jira.
Waxaan iibsaday kuwan 2
3mm naylon dun
Haddii aad sidoo kale xiiseyneyso inaad awood u leedahay isticmaal nooc kasta oo ka mid ah dunta nylon Waxaan kuu daayay laba wado.
Dib u isticmaal balka
Haddii aan aragno qalabka dayactirka waxay leeyihiin aalad yar oo aluminium ah. Ma hubo waxa dhici doona haddii aan si toos ah u dhigno fiilada go'an. Markaan arko sida ay wax u dhacaan, waxaan u maleynayaa in markii ay qabsato cawska qaarkood ay sibiibixayso oo ay madaxa ka soo baxayso. Taasi waa sababta aan u isticmaali doonno handarraabbadeedii.
Waxaan uga tagayaa fiidiyoow isbedelka
Haddii aad doorbideyso inaad aragto nidaamka talaabo talaabo ah oo sawirro leh, halkan waad ku haysataa.
Qaado xinjiraha sanka baqbaqaaq, oo ka bixi cilladda. Marka waxaan heli karnaa inta hartay dunta aan ka tagnay
Adiguna waa inaad mid cusub jartaa, geli oo mar labaad riix si uusan u siiban.
Iibso madaxa caalamiga ah
Waa ikhtiyaar kale oo wanaagsan. Waxaan soo iibsanay madax kale oo caalami ah ama is waafajin kara mashiinkeena hadana waxaan isticmaali karnaa nooc kasta oo dun ah. Noocyada madaxani waxay ku kacaan between 5 iyo € 15.
Sidan ayaanu ugu beddelan karnaa dun kasta oo aannu doonayno. Waan iibsaday Bari inkasta oo aanan wali isku dayin
Madaxa anigoo weheliya waxaan soo iibsaday silig tidcan 3,5mm iyo silig bir ah oo dahaarka leh si aan u tijaabiyo sida wanaagsan ee ay u shaqeyso maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inuu waxbadan xirnaan doono.
Waxaan ka baqayaa in bir ahaansho wax dhimbiil aan la rabin ay boodaan, laakiin markaan isku dayo waan kuu sheegayaa.
Qalajiyaha burushka korontadu ma u qalantaa?
Tani waa su'aasha ay dadka badankoodu i weydiiyaan cidda aan u sheego in aan koronto soo iibsaday.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo tan maxaa yeelay waa wax la isoo weydiiyo si isdaba joog ah.
Jawaabta sida had iyo jeer waa in ay ku xiran tahay. Waxay kuxirantahay waxaad ubaahantahay. Waxaan u isticmaali doonaa berrin 2 daadad ah, halkaas oo aan kula xiriiri karo fiditaanno dhibaato la'aan. Markaan dhammeeyo waxaan ku qaadaa guriga gaadhiga dhexdiisa waxaanan dhigaa armaajo. Waana la mahadiyey inaysan ku wasakheynin baatrool iyo saliid, in aysan urin wax walboo ay doqon u muuqato, hadana waa lagu qanacsan yahay markaad isticmaasho inaysan sameynin buuq xad dhaaf ah.
Laakiin waa inaad ogaataa waxaad iibsato, marka loo eego qaabkan gaarka ah (Bosch ASF 23 - 37) waa inaad si joogto ah u adkeysaa amniga si ay u shaqeyso waxayna noqoneysaa mid culeys yar. Laakiin inta soo hartay waa qumman yihiin.
Haddii aad u baahato mashiin leh awood caadi ah, waxaad u adeegsan doontaa jawi aad ku xiri karto dhibaato la'aan waxaadna dooneysaa wax buuq yar oo aan wasakheyn (si aan gaariga u wasakheyn ama markaan ilaaliyo) guriga) Hagaag, korantada ayaa ah ikhtiyaarkaaga ugu fiican.
Haddii aad u baahan tahay inaad u qaaddo meelaha korontada aan lahayn, waxaad u baahan tahay xoog badan, in ka badan 1CV
Looma baahna in laga feejignaado baatrool iyo saliid
Waa inay had iyo jeer isku xirnaataa oo aad lumisaa xorriyadda
Ma isticmaali kartid koronto la'aan
Ma jiraan tusaalayaal u awood badan sida shidaalka oo kale
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid waxaad igu weydiin kartaa faallooyinka Haddii aad rabtona inaan ballaariyo mowduucan waan sameyn karaa tusaha iibsiga burushka magaabay.
Sida loo saxo sawirada dufcado ama dufcad (sidaa ...
Categories Dayactirka Tigidhka tigidhka
1 Dib u isticmaal balka
2 Iibso madaxa caalamiga ah
3 Qalajiyaha burushka korontadu ma u qalantaa?